Israa’iil oo darbi ka dhiseysa dhulka hoostiisa! - BBC News Somali
Israa’iil oo darbi ka dhiseysa dhulka hoostiisa!
Image caption Darbiga ay dhiseyso Israaiil
Dowladda Israa'iil ayaa dardargalineysa mashruuc ay ku kacayso lacag dhan $833 milyan oo doolar oo lagu dhisayo darbi dhulka hoosta ugu jira 40m, korna ah 6m, kaasi oo ujeedku yahay in dagaalyahanada Xamaas ee Gasa looga hor istaago in ay isticmaalaan godad dhulka hoostiisa ah.
Dagaalkii 50 maalmood ee dhacay sannadkii 2014-kii kadib duulaankii Israa'iil ay ku qaaday marinka Qasa ayaa waxaa dhacday in dagaalyahanada Xamaas ay isticmaaleen waddooyin ay ka jeexdeen dhulka hoostiisa, kuwaasi oo ay u isticmaalayeen in ay weeraro ka geystaan Israa'iil gudaheeda.
Dagaalkaasi ayaa waxaa lagu diley 2,251 qof oo falastiiniyiin ah, 1,462 ka mid ah ay shacab yihiin sida ay sheegtey Qaramada Midoobey. Dhanka Israa'iil waxaa kaga dhimatay 67 askari iyo 6 qof oo rayid ah, halka la dhaawacay 1,600 qof.
Jeneraal ka tirsan ciidamadda xoogga ee Israa'iil oo lagu magacaabo Jeneraal Eyal Zamir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegey in darbiga uu noqon doono mid lagu rakibay qalab casri ah , ujeedkuna uu yahay in looga hortago Xamaas.
Go'doominta ay Israa'iil saartay marinka Gasa ayaa waxa uu horseedey in shacabka Falastiin ay isticmaalaan godad dhulka hoostiisa ah si ay dalka Masar oga keensadaan badeecooyinka daruuriga ah. Balse sidoo kale godadka dhulka hoostiisa waxaa isticmaala kooxaha